Sun TV – Networks – MMANIME
Koi to Senkyo to Chocolate Yuuki Oojima က အစားအသောက်သုတေသနကလပ်တစ်ခုရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက် အဲ့ကလပ်ထဲမှာကလဲ ပေါက်ကရလုပ်တတ်တဲ့သူတွေဘဲစုနေတာမို့ အစားစားလိုက်စကားများလိုက်နဲ့ ကလပ်ရန်ပုံငွေကိုတပျော်ကြီးထိုင်ဖြုန်းနေကြတာပေါ့ ဒီလိုနဲ့တစ်ရက်တော့ အဲ့လိုပျော်ပါးနေတဲ့ အချိန်လေးပျက်စီးဖို့အချိန်ကြရောက်လာပါတော့တယ် ဘဏ္ဏာရေးကော်မရှင်က Shinonome Satsuki ဆိုတဲ့ကျောင်းသူက ကျောင်းမှာရှိတဲ့ကလပ်တော်တော်များများ ရန်ပုံငွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ဘာအကျိုးမှမဖြစ်လာတဲ့အတွက် တစ်ချို့ကလပ်တွေကိုဖျက်သိမ်းဖို့လုပ်လာပါတယ် ဒါပေါ့ တစ်နေ့တစ်တစ်နေ့ စားလိုက်စကားများလိုက်နဲ့ ရန်ပုံငွေထိုင်ဖြုန်းနေတဲ့ အစားအသောက်သုတေသနကလပ်ကြီးလဲပါ ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ သူတို့ကလပ်ကိုကယ်တင်ဖို့ရာ ဘဏ္ဏာရေးကော်မရှင်အဖွဲ့အပါအဝင် တခြားသောအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ အပြိင်အဆိုင် ကျောင်းကောင်စီဉက္ကဌနေရာကိုယူဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ် Oojima Yuuki မှာ Sumiyoshi Chisato ဆိုတဲ့အမြဲတူတူသွားတူတူလာ သူငယ်ချင်းကောင်မလေးလဲရှိပါသေးတယ် နှစ်ယောက်သားအနေနီးပုံများကတော့ ဟိုကောင်မလေးက ဒင်းကိုအိပ်ရာမထမချင်း ဖက်နမ်းမိမတတ်လာနှိုးပေးတာပါဘဲ သူတို့ကသူငယ်ချင်းအဆင့်ဘဲလား ဒါမှမဟုတ်..... မင်းသားကတော့ harem ပုံစံမပေါက်ပေမဲ့ အဲ့လိုပုံစံလေးနဲနဲဖြစ်ပါတယ် Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode 10 Episode 11 Episode 12 Episode 13(OVA) #KichiroANIME
Ms. Vampire Who Lives in My Neighborhood. Ms.Vampire who lives in my neighborhood Name - Ms.Vampire who lives in my neighborhood Genres - Slice of Life, Comedy, Supernatural, Vampire, Shoujo Ai Status - ongoing Aired -Oct52018 to?? Episodes -12 ဒီ ဇာတ္လမ္းကေတာ့ ေခတ္သစ္ vampire တစ္ေကင္အေႀကာင္းကိုဟာသေလးေႏွာျပီး ရိုက္ထားတာပါ တစ္ေန႔မွာ Amano ဆိုတဲ့ လူသားေကာင္မေလးဟာ ေတာထဲမွာလမ္းေပ်ာက္ေနတုန္း Sophire ဆိုတဲ့ vampire (admin waifu) မေလးဟာ သူ႕ကို ကယ္တင္ခဲ့ပါတယ္ Amano မွာ အက်င့္တစ္ခုရွိပါတယ္ အဲ့တာကေတာ့ အရုပ္ကေလးေတြစုေဆာင္းရတာ ဝါသနာပါတာပါပဲ ခုလည္းသူေတာထဲလမ္းေပ်ာက္တာဟာ သူ႕သူငယ္ခ်င္းေျပာတဲ့ သက္ရွိအရုပ္တစ္ခုကို လာရွာတာပါတဲ့ ကံအားေလ်ာ္စြာဘဲ သူ႕ရွာေနတဲ့ သက္ရွိအရုပ္ကေလးဟာ vampire ...
Invaders of the Rokujyouma!? Invaders of Rokujouma! Name -- Invaders of Rokujouma! Genres -- Comedy, Harem, School, Supernatural Episodes --12 Aired -- Jul 12, 2014 to Sep 27, 2014 Project Holders--bkking and Aung Myat Min Plot Satomi ဆိုတဲ့ေကာင္ေလးဟာ အထက္တန္းစတက္တဲ့ႏွစ္မွာဘဲ တစ္ေယာက္တည္းေနထိုင္ဖို႕အတြက္ တစ္လကို ယန္း၅၀၀၀သာ ေပးရတဲ့ အခန္းကို ဌားခဲ့ပါတယ္ ေစ်းကေတာ့ သက္သာေပမဲ့လည္း တစ္ခုထူးဆန္းတာက အဲ့အခန္းဟာသရဲေျခာက္တယ္လို႕ နမည္ႀကီးပါတယ္ ဟုတ္ကဲ့ ဘယ္ေလာက္ဘဲ သရဲေျခာက္ေစကာမူက်ေတာ္တို႕MC ကပ္ေစးနည္းကေတာ့ လံုးဝလက္မလႊတ္ပါဘူး ဒီလိုနဲ႕ ေနလာရင္း တျခားကမ႓ာက Loli ေလးရယ္ ေျမေအာက္ကမာ႓က oppai မေလးရယ္နဲ႕ cosplayer မေလး (မွားလို႔ ေမွာ္ဆရာမေလးရယ္) တို႕ပါ အခန္းထဲ ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ ဘာဆက္ျဖစ္ႀကမလဲ ေနာက္ဆံုး အခန္းကို ...